आफ्नो कारणले १५ मिनेट ढिलो उडान भएकोमा पर्यटन मन्त्रीको क्षमा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बुद्ध एयरको उडानमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने क्रममा सबै यात्रुको यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा आफ्नो टिमको बोर्डिङ भएको जनाउँदै यसबाट यात्रुहरुमा पर्न गर्नको असुविधाप्रति पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्षमा मागेका छन् । शनिबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने क्रममा पर्यटनमन्त्रीका कारण बुद्ध एयरको उडान १५ मिनेट ढिलो भएको थियो ।
उडानमा ढिलाई भएको भन्दै केही व्यक्तिले पर्यटनमन्त्रीबिरुद्ध विमानभित्रै आक्रोश पोखेका थिए । एकजनाले पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुस्ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको र त्यो सुनेपछि आफूले उनीहरुको नियम बुझेको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।
भिडियोमा केही यात्रुहरु असाध्यै असभ्य शैलीमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन् भने पर्यटनमन्त्री भट्टराई शान्त र मौन बसेका देखिन्छन् । एकजनाले भिडियोमा यो भन्दा पञ्चायत नै राम्रो भएको समेत बताएका छन् ।
कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा आयोजना भएको डलफीन महोत्सबको कार्यक्रम सकेर बुद्ध एयरको धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कने आफ्नो योजना रहेको तर कार्यक्रम ढिला भएको कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कनेक्रममा केहि ढिला हुन गएको सत्य पर्यटनमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वीकारेका छन् ।
उनले भनेका छन् – ‘सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए । नेपालगंज बिमानस्थलमा तीनचार जना ब्यक्तीहरु आक्रमक शैलीमा मेरा बिरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु । मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति भने क्षमाप्राथी छु ।’